Theresa May & Donald Trump oo taleefan uga wada hadlay Bariga Dhexe – Kasmo Newspaper
Theresa May & Donald Trump oo taleefan uga wada hadlay Bariga Dhexe
Updated - December 20, 2017 10:02 pm GMT
London (Kasmo), Ra’iisal Wasaaraha Britain, Theresa May iyo Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa, mar ay khadka taleefanka ku wada hadleen, 19kii Disember, isla soo qaaday geedisocodka nabadda Bariga Dhexe.
Sida laga wariyay Aqalka Cad, 2da mas’uul waxay is weydaarsadeen hambalyada Ciidda Masiixiga, waxayna isku af garteen sidii nabad loogu soo dabbaali lahaa xaaladda Gobolka Bariga Dhexe.
War-murtiyeedka kolleyba waxaa laga dhowray in lagu soo xigto go’aankii dhowaan Donald Trump ugu aqoonsaday Qudus in ay tahay Casimadda Israel.
Laakiin wargayska The Guardian, si ka duwan warka Aqalka Cad, wuxuu caddeynayaa in 2da mas’uul, khadka taleefankii 19kii Disember uga wada hadleen Qudus, walow aan tafaasiil laga hayn wixii ay iska yiraahdeen.
Xaaladda magaalada Barakaysan ee Qudus waxay kicisay carada Beesha Caalamka, mar haddii maqaamkeedu ka mid yahay caqabadaha ugu weyn geedisocodka nabadda Falastiin iyo Israel.
Waxaa kale oo ay Maraykanka gaarsiisay in uu gooni uga soocmo saaxibbadiisii weynaa, sida Britain, markii Isniintii, 14kii Disembar, Qaraarkii Golaha Ammaanka ee ku saabsanaa maqaamka Qudus uu ku riday diidmada qayaxan (Veto).
Durabadiiba ku-dhawaaqisti aqoonsiga Maraykanka ka dib, Theresa May waxay go’aanka Trump ku tilmaantay “mid aan waxtar u lahayn geedisocodka nabadda”.
Waxaa kale oo loo malaynayaa in May iyo Trump isla soo qaadeen xaaladda Yaman oo ay ka taagantahay masiibo baniaadam, dagaallada ka soconaya ilaa 5tii March 2015 dartood.
Waa kulankii u horreeyay oo taleefan oo 2da mas’uul dhexmara, wixii ka dambeeyay iska horimaadkii bishii Nofember, markii Trump ku wadaagay Twitterka, video Islaam-nacayb ah oo koox midigta fog ee Britain ah baahisay.
Tillaabadaasi ma noqon mid laga jeclaystay Downing Street, oo dhaqanka Madaxweynaha Maraykanka ku tilmaantay “Mid khaldaan ah”.
Ma kala cadda wali in Trump kula kulmi doono May London, dhammaadka Febraayo 2018ka, kulankoodii rasmiga ahaa ee u horreeyay-se wuxuu ka dhacay Washington, 28kii Jenaayo 2017, toddobaad ka dib caleemasaarkii Trump.